Corruption ‣ Zimbabwe Voice
zimbabwevoice_1November 28, 2021
ZIMBABWE Anti-Corruption Commission has descended on Karoi Town Council arresting two officers, its chairperson and five councillors for various corruption allegations. The arrested are accused of unprocedurally allocating themselves residential and commercial stands, and awarding themselves unapproved travelling and subsistence allowances. Town secretary, Wellington Mutikani, who was recently suspended during a special council meeting, is facing four counts of unprocedurally…
zimbabwevoice_1August 6, 2021
By Mutsa Makuvaza NORTON Town Council’s Finance Director, Stephen Tendaupenyu has been nabbed over his alleged involvement in a tender scam involving the acquisition of road compactors. The Zimbabwe Anti-Corruption Commission (ZACC) haa confirmed the arrest, saying the town council is yet to receive the said machinery which was paid for four years ago. “Norton Town Council Finance Director Stephen…
ED wants anti-corruption curricula from ECD to varsity level
TO win the anti-corruption war, Zimbabweans must be empowered to hold office bearers both in the public and private sector to account, while plans are afoot to introduce anti-corruption curricula from ECD to tertiary education, President Mnangagwa has said. He was speaking during a virtual commemoration of the 5th African Anti-Corruption Day yesterday, where he also launched the Zimbabwe Anti-Corruption…